Indawo ekhethekileyo kwindawo engaphandle
Igumbi lakho lokulala e iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) sinombuki zindwendwe onguLenka
Bantu abathandekayo, igama lam ndinguLenka kwaye ndidale iKhaya kuye wonke umntu ofuna ukuziva esekhaya kuhambo lwakhe hayi ehotele. uxhotyiswe ngokupheleleyo kwaye uyisebenzise.Indawo enoxolo nethuleyo efudumeza umoya.Kubantu abanendlela yokuzimela abaqondayo ukuba bona ngokwabo bangamandla aqhuba ulonwabo nolwaneliseko kwaye akukho mntu wumbi.Iti ye-herbal yasekhaya onokuthi uyifake kwaye
Eyona nto iyingqayizivele yale ndawo kulapho ilele khona, yintoni eyirhangqileyo kunye nento ephuma ngaphakathi nangaphandle. Izixhobo zayo kunye noyilo zizisa ulungelelwaniso ukuze abantu bazive bephilile apha.
Ifulethi lipholile, libanzi kwaye lixhotyiswe ngoluhlu olubanzi lwezixhobo. Inendalo eyingqongileyo entle, indalo namasimi angenasiphelo, umoya ococekileyo kwaye kukho uxolo olukhethekileyo. Yonke into oyifunayo ebomini inokufumaneka apha. Asiyondawo eninzi yeentlobo zabantu ezibangwayo nezinokutyiwa, kodwa yeyabo bayibonayo inyaniso neentliziyo zabo zivulekile.
Ummandla ojikelezileyo unama-quarries aphefumulayo kunye namachibi okuloba okanye ukubhukuda, ukutyibilika ebusika okanye ukuhlala nje ebhentshini emanzini. Iindlela ezingenakubalwa zemimandla yokuhamba kunye neebhayisekile, amahlathi kunye nokukhwela ihashe, i-roller skates, ibhola ekhatywayo, intenetya ... Indlu inepiyano yamaxesha obugcisa kunye nebalcony enika iimbono ezintle ngelixa uhleli.
Unokufumana imvakalelo yokwenyani yekhaya kunye nokuba ngowakho.
IBřežany II inevenkile yegrosari evulwa 7days ngeveki. I-pub yendawo enendawo yomlilo ngaphakathi, apho unokudlala iidathi kwaye wonwabele iintlobo ezi-3 ezahlukeneyo zebhiya eyidrafti inegadi ehleli ngaphandle phantsi kophahla iintsuku ezishushu.
Iindawo zokuhamba ngeenyawo ziikwari zamatye kwindawo ezimbini, zisonga ngamahashe atyisayo, amachibi amathathu, amasimi equnube kunye namaqunube apho unokuya khona ukuzivuna. Amabala amnandi kunye neendlela zebhayisekile, i-scooter, i-roller skating, ukubaleka ... ukuya ehlathini yimizuzu embalwa. Inkundla yentenetya kunye nebala lebhola ekhatywayo zikwilali, kunye neendawo zokudlala ezimbalwa zabantwana, indawo yokudlala enemisebenzi emininzi kunye nejimu entsha yangaphandle ikwanabantu abadala. Indawo entle nezalisekisayo ebizwa ngokuba yiKlepec yiNdalo yogcino lweNdalo e-Skřivany 7 km kude, ihlathi laseKlánovice eli-10 km, eDoubravčice elinehlathi elingaqondakaliyo kunye neendlela ezingama-20 km. Ukuhlamba ngokwendalo emachibini kuse Jevany, Sadská, Poděbrady, Lázně Toušeň 15-20 km kude.
Ukuthenga eČeský Brod, Úvaly 7KM okanye unokuhlala ufumana yonke into ePrague.
Umbuki zindwendwe ngu- Lenka
Ewe, ndiyakwazi ukuba nawe ngexesha lokuhlala kwakho. Oko kukuthi, njengoko ixesha liya kundivumela.